Iindawo ezi-7 ezinokuthenjwa zokufumana iphepha lodonga leKrisimesi yasimahla - Ukuhonjiswa Kwekrisimesi
Iindawo ezi-7 ezinokuthenjwa zokufumana iphepha lodonga leKrisimesi yasimahla
Emva kokubauhombise ikhaya lakho ngeKrisimesiLixesha lokuba uhombise eyakhoikhompyutha ngeeholidengokukhetha iphepha lodonga leKrisimesi lasimahla. Kukho inani loyilo olukhoyo, ezininziIiwebhusayithi zinika iKrisimesi ehlekisayowallpapers kunye nokunikezelwa okumbalwaDisney iKrisimesiiphepha lodonga. Kulula ukufumana into ekwenza uncume!
1. lodonga Safari
Iphepha lodonga Safari ubonelela ngamaphephadonga anemixholo emininzi yeKrismesi afaka i-mystique yasebusuku yekhephungaphimbi kwekhisimusi. Unokuzikhuphelela amaphephadonga aliqela eSanta, anjengeSanta ekhwele kwi-sleigh yakhe ubusuku obunobusika, izibane zeKrisimesi zikhazimla kwisitalato sedolophu, ubusuku bamahlathi anekhephu, iindawo ezahlukileyo zomntu onekhephu, umthi weKrisimesi echibini, iindawo ezininzi zekhephu, kunye Isileyi esitsalwa lihashe leKrisimesi.
Ungayakha njani iirock
8 Izipho zeKrisimesi zeNkolo eziGqibeleleyo kuwo onke amaXesha
Iingcamango zeZipho zeKrisimesi eziCinga ngeeTitshala
Izipho ezili-10 zeKrisimesi ezilula ezenzelwe nabani na
2. IBrand Thunder
Iindudumo zeBrand unemifanekiso yamaphephadonga ebonisa uSanta, amadoda ekhephu, imithi yeKrisimesi, izibane zeKrisimesi kunye nezinye izinto ezithandwayo zeholide. Unokukhetha kwigumbi elimnandi leKrisimesi e-3D enezinto zokudlala zeKrisimesi kunye nezipho, ukuhleka kukaSanta, ikhandlela elinye elivuthayo, idolophu encinci yasebusika ekhephu kunye nekhadi leKrisimesi
3. Fumana ii-Wallpaper
Fumana iiPhephadonga ibonelela ngeemifanekiso zephephadonga zeKrisimesi ezi-3D Unokufuna ukukhuphela indawo yokuzalwa ebekwe phambi kwecawa, uSanta kunye nendoda yekhephu, uSanta noRudolph iindawo ezahlukeneyo zaseSanta, imithi yeKrisimesi, izibane zeKrisimesi zedolophu, iziqendu ezimbalwa ezinama-elves, iipakeji zekrisimesi, iindawo zasebusuku ezinekhephu, kunye Amaphephadonga ambalwa aneempawu zeDisney.
4. Iifoto ze-SF
Iifoto ze-SF Iimbonakalo ezininzi zekhephu zasebusuku zekrisimesi zeSanta kunye ne-reindeer yayo, imithi yeKrisimesi, indawo yokubasa umlilo kunye neenyamakazi kwiindawo ezinekhephu. Uninzi lweemifanekiso zamaphephadonga zinomahluko ohlaza okwesibhakabhaka obonisa ubusuku.
5. Iphepha lodonga lokuqala
Ukusekwa kwePhepha lodonga ibonelela ngeemifanekiso zamaphephadonga ze-iPhone ezimbalwa. Kukho ukhetho oluninzi lwemithi yeKrisimesi enikezelweyo kunye nomnye oneemvumi ezintathu zekhephu.
Kunzima ukufumana imovie kwi-dvd okanye vhs
6. Ukuthanda iNkosi
Umnqweno weNkosi ibonelela ngamaphephadonga amaninzi e-GIF ngokukodwa kwiipilisi, ii-iPhones kunye nezinye izixhobo eziphathwayo. Unokukhetha kwimithi yeKrisimesi, uSanta kunye nesileyi yakhe, ubusuku bekhabhathi enekhephu, oonombombiya kwizikhafu ezimibalabala kwikhephu, nakwindawo eselunxwemeni yetropiki, ibhola yomhombiso ejikelezayo etshintsha imibala, kunye nophawu lweKrisimesi emnandi kunye nonyaka omtsha.
7. Ukudlala iphepha lodonga
Ukudlala iphepha lodonga ibonisa ingqokelela yeephepha lodonga eziyi-61. Iimifanekiso zamaphephadonga ziquka imifanekiso eyahlukeneyo yekhephu yasebusuku, i-snowmen e-hats kunye ne-capes ezimibalabala, uSanta kunye ne-snowman, uSanta kunye nabahlobo bakhe, imithi eyahlukeneyo yeKrisimesi, uSanta kwi-sleigh yakhe kunye nabalinganiswa abambalwa be-Disney.
Nangona iifoto zekrisimesi zasimahla ezinokuba yindlela emnandi yokwenza i-jazz kwikhompyuter yakho yasekhaya, lumka xa usongeza ezi zoyilo kwidesktop yakho yasemsebenzini. Izibane ezidanyazayo, ukutsiba kwabalinganiswa kunye neziphumo zesandi zinokuphazamisa kwimeko yeshishini. Ukongeza, ezinye iisayithi ezibonelela ngoyilo lodonga simahla zaziwa ngokuba yimikhosi ye-spyware, i-adware, intsholongwane kunye nezinye izinto ezinokubangela iingxaki kwikhompyuter yakho.
Ukufumana iindawo eziBonelela ngePhepha lodonga leKrisimesi yasimahla
Kukho iindawo ezininzi ezibonelela ngemifanekiso yasimahla yeKrisimesi. Unokuthatha isigqibo sokutshintsha iphepha lodonga rhoqo ngexesha leholide ukuze uthathe ithuba loyilo olungaphezulu kwesinye.
Izinja Nokuhamba Uqhawulo-Mtshato Minivans Izifundo Uyilo Lokulala Dsigns
ungasusa njani ibala
kutheni iipisces zilunge kangaka ebhedini
isilwanyana esikhuselekileyo sokubulala ukhula esingayi kubulala ingca
Umbongo womhlobo osweleke
I-asperger's syndrome kuluhlu lweempawu zabantu abadala